Anja Schaap dia mahita sary ao amin'ny 'Fanadihadiana nangatahana' ary noho izany tsy misy PsyOp? : Martin Vrijland
Raha toa ireo fangatahan'ny fanadihadiana nangatahana tamin'ny alina, dia azonao atao ny manatsoaka avy hatrany fa tsy afaka ny hifampiraharaha amin'ny hafa PsyOp (fiasa ara-tsaina) intsony. in ny lahatsoratrao momba ny tsy hita popoka Anja Schaap no nampiseho ny fomba RTL Nieuws dia nitarika ny 'fikarohana' nataon'i Sherlock Holmes momba ny fahaverezana sy ny fomba nandraisan'i Anja Schaap ny zava-drehetra momba an'i Sherlock Holmes tao amin'ny pejiny Facebook. Na ny adiresy an-trano izay lazainy ao amin'ny pejiny Facebook dia ny an'i Sherlock Holmes (221B Baker Street).
Maro no nanondro ny PsyOp mba hanosika ity fampiharana fikarohana ity eo anivon'ny vahoaka. Nohazavaiko ihany koa hoe nahoana ny olona no te-hikaroka. Izany dia misy ifandraisany amin'ny hoe tsy misy mpitsikilo tsaratsara kokoa noho ny olona izay manomboka mahita ny mpiara-belona aminy ho toy ny lalao Pokémon mahaliana. Ankoatr'izany, ny mpitandro filaminana dia afaka manaisotra ara-drariny ireo finday rehetra ireo aorian'ny fotoana nanaiky ny zo hampiasa ny fakantsary, ny mikrôfo, ny toerana misy ny toerana, sns.
Ao amin'ireo sary etsy ambany ao amin'ny Opsporing Verzocht dia hitantsika mazava tsara ao anaty café i Anja Schaap, mipetraka eo am-baravarankely ary mandeha amin'ny Katwijk. "Tena misy tokoa izy ary tena nirenireny tamin'ny Katwijk izy ary tena marina tokoa ny fatiantoka", Avy eo angamba ny fanatsoahan-kevitrao. Avy eo aho dia mampahatsiahy anao indray fa ny Algemeen Nederlands Persbureau dia eo an-tanan'ny mpamokatra TV: John de Mol. Midika izany fa azo amboarina amin'ny alalan'ny famokarana TV (teknolojia Hollywood) ny vaovao. Amin'ny rindrambaiko androany, afaka mamorona endrika endrika tsy misy ianao. Azonao atao ny manoratra olona iray manontolo ary avelao ny mpilalao sarimihetsika na mpilalao sarimihetsika handeha eo amin'ny làlana ary avy eo dia mametraka ny vatana sy ny tarehin'ilay toetra noforonina. (Vakio eto ambany ny lahatsary, raha esorina ilay video, click here)
Izay rehetra nanaraka ny raharaha Anne Faber ary vao haingana no nahita ny raharaha Julie van Espen tany Belzika tamin'ny vaovao dia tsy maintsy nahamarika fa nisy fitoviana goavana tamin'ireo tranga roa ireo. Raha manaraka ny fampahalalam-baovao isika, ity vaovao ity dia fahamarinana fotsiny. Raràna amin'ny sary izay manamarina ny maha-azo itokiana ary tsy mahita fianakaviana sy namana fotsiny isika, fa mahita sary sy lahatsary tena misy ihany koa isika, izay midika fa tsy afaka ny ho hafa noho ny marina izy io. Amin'ity raharaha Anja Schaap ity indray dia ireo sary izay mandresy lahatra antsika fa tena misy i Anja Schaap ary tsy mety intsony ny PsyOp.
Amin'ity lahatsoratra eto ambany ity dia hiezaka aho hanazava ny antony mbola tsy maintsy hikapoka ny lohanao. Fampidirana fohy voalohany.
Renay ny troll 'factory troll' na 'troll army', saingy izy ireo dia any Rosia (miteny amintsika ny media). Na izany aza, ny zavatra niainako dia ny hoe ireo miaramila troll ireo dia any Holandy. Tsy mahita an'izany intsony aho amin'ny valinteniko, satria manasitrana azy ireo aho amin'ny fampiasana sivana amin'ny tenimiafina. Aoka hotenenina fa rehefa miasa ny Sampan-draharahan'ny PsyOp (fikarakarana ara-psikolojika) sy mivarotra izany mahomby 'manerana ny sisintany' (satria tsara ho an'ny fireneny), mila milisy troll ianao mba hahazoana ny valim-panontaniana amin'ny sehatra rehetra sy ny adihevitra an-tserasera ao amin'ny sosialy media "hanaraha-maso". Azon'izy ireo atao ny mitarika ny adihevitra amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra toy ny hoe "Fantatro izy". "Niresaka tamin'ny olona nahafantatra azy aho"Na" niaraka tamin'ny namako iray tao amin'ny birao "izy ary fanehoan-kevitra hafa.
Avelao aho hanomboka amin'ny fanazavana indray ny fomba ahafahan'ny fampahalalam-baovao hilalao ity lalao PsyOp ity sy ny an'ny Olana, fihetsika, vahaolana Fitsipika izay toa ampiharina amin'ny fotoana sy ny fotoana.
Afaka miasa miaraka amin'ireo teknika voalaza etsy ambony ianao mba hamoronana olana toy izany. Raha ny tena marina, midika izany fa tsy afaka manandrana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana ny resadresaka, teny na sary. Ary koa tsy ny sarin'ireo kamera fiarovana, araka ny hitanao amin'ny TV. Sa tsy inoanao fa azo ampiasaina amin'ny tanjona psyop ny Detection Wanted? "Mpampita vaovao mahafinaritra izany."
Noho izany dia tsy afaka mino ny masonao intsony ianao. Ny televiziona sy ny haino aman-jery hafa dia afaka mamelona aina amin'ny olona tsy misy. Na dia mihevitra ianao fa voarakitra amin'ny finday ary na avy amin'ny fakantsary fiarovana aza, tsy azonao antoka fa tena izy io. Azo atao ny zava-drehetra ary tsy misy zavatra tsy azo atao eo amin'ny tontolon'ny media. Tokony handinika tsara foana ianao vahaolana manaraka taoriana kelin'ny hetsika lehibe toy izany.
Ny zava-nisy tamin'i Anja Schaap indray dia toa tsy maintsy hatsangana amin'ny toerana ambony. Vao tsy ela izay, ny antsasak'i Holandy dia nitazona smartphone iray teny an-tanany mba hijery ireo tarehin'ny Pokémon ao anatin'ny lalao tena marina. Ny tanjona dia ny mamantatra ny famantarana ny fanarahamason'ny olona hafa ny vahoaka ho lasa miaramila mpanafika tsara indrindra. Fitaovana ho an'ny tanora rehetra afa-nandositra izay te-handositra ny fitondrana fikarakarana zatovo henjana na mahasoa ho an'ireo mpanohitra mety hampidi-doza. Ny tovovavy Stasi any Alemana Atsinanana dia zatovolahy kely fotsiny tamin'ny zavatra hitanay fa natsangana tany Holandy. Nisy iray tamin'ireo mpitsoa-ponenana tao amin'ny Inoffizieller dimampolo. Miaraka amin'ny fanamarinana ny fikarohana, dia ho mpitsikilo tsy ho ela ny olona rehetra.
Tags: 221B Baker Street, adiresy, Anja, App, sary, Featured, Holmes, Katwijk, mamantatra, ondry, Sherlock, nanontany
19 June 2019 ao amin'ny 11: 42
Ho an'ireo izay somary mahavita mahita fifandraisana, jereo fotsiny izay nahazoan'i De Mol ny lazany. Hevitra roa (fanandramana ara-tsosialy) no misongadina avy amin'ny Big Brother sy Utopia izay asehon'ny olona manoloana ny fiarahamonina iray manara-maso azy, izay ahitàna ireo mpanohitra mivoaka ary ny ora 24 fanamarinana ny fanjakana raha toa ka tsy voamarina hoe 'misavoritaka' olona ', dia nitazona olona voatifitra teo ambany fiantraikan'ny opiates. Tonga soa eto amin'ny Madurodam amin'ny hoavy
19 June 2019 ao amin'ny 12: 34
Ry Katwijkers sy Katwijkerinnen malala, manontania tena raha toa ka mety marina ny fanadihadiana etsy ambony. Mandehana ary tadiavo i Anja, fa jereo hatrany ny fanadihadihana etsy ambony ho anao koa, jereo koa raha misy ireo olona lazaina fa mpianam-pianakaviana sy ireo sipany sy mpifanolobodirindrina aminy, jereo tsara izany.
Hatreto dia mbola tsy nahare ny olona nipetraka teo akaikin'i Anja ianao ao amin'ny Grand Cafe de Blauwen Bock (jereo ny Lahatsarim-panadihadiana nangatahana). Hitantsika ihany koa ny mpifanolobodirindrina A Schaap 1 ary hitantsika fa ilay mpifanolo-bodirindrina dia sary vongana miaraka amin'ny teknika lalina.
Ireo rahalahy sy rahavavin'i Anja, tokony ho dimy no efa hitanao.
Aiza ireo namana lazaina fa Anja ireo?
Katwiker dia tena olona mahatoky, saingy tsy voafitaka izy ireo, ka tsy izany koa ankehitriny.
Maro ireo fanontaniana misokatra ho anay fa mitaraina ho valinteny izy. Mahatsiaro ny poizina indrindra ianao
Misy zavatra hafahafa ihany koa: Eto ambany ny Leidsch Dagblad, fanehoan-kevitra zero ????, farany taorian'ny herinandro 3 ireo Katwijkers dia nahazo sarin'i Anja !!!
Ireo Katwijkers sy Katwijkerinnen malala dia mamaky izany indray (satria mety ho voafitaka isika)
19 June 2019 ao amin'ny 14: 16
Ny zavatra nosoratan'i Martin dia marina. Mampalahelo fa tsy mahita izany ny olon-tsotra na tsia, tsy te hahita izany satria mandà ihany koa izy ireo. Tsy misy zava-misy marina. Ny "fisakaizana" dia sandoka sy manafina. Ny tsirairay dia mandray anjara amin'ny sehatry ny micro, Facebook, sns. Raha ny marina, 'tsy tokony hanantena zavatra avy amin'ny olon-tsotra isika. Tsara ihany izy ireo, manana karama tsara / azo raisina mifandraika amin'ny ambany IQ sy ireo hetsika tsotra. Raha ny marina, ny mponina dia miaina ao amin'ny fanjakana iray mpampindram-bola izay tokony hifikitra tsara amin'ny lafiny iray. Ny harenan'ny mponina dia manana fifandraisana mivantana amin'ny fahantrana amin'ny fanjakana trosa eto amin'izao tontolo izao. Fifampiraharahàna amin'ny vehivavy, fivarotam-panafody, sary vetaveta ankizy, fanondranana zava-mahadomelina, fanadiovana vola, fanorenana ala, fifanarahana momba ny hetra, sns. Tsara, Madurodam dia iray amin'ireo firenena lehibe indrindra amin'ireo tovolahy avy ao amin'ny script. Manontany tena ve ny antony mahatonga ny firenena hafa tsy mahira-tsaina amin'ny fanomezana fifanarahana momba ny hetra sy fanomezana tombontsoa amin'ny orinasa sns tahaka ny nataon'i Madurodam? Ny antony dia ireo firenena hafa dia tsy mahazo alalana hanao izany avy amin'ny lehilahy avy amin'ny script. Ny firenena dia tsy mahaleotena ary voafehy, notononin'ireo ankizilahy ao amin'ny script. Mihevitra ny mponina fa tsara izany ary milalao ny lalao. Misy ny fifanarahana madinidinika eo amin'ny elit 'ny mpifindra-monina, ny ankizilahy ao amin'ny script, ary ny olon-tsotra. Raha mbola tsy mandeha lavitra loatra izy ireo, dia ho tsara ny mponina. Ny mponina dia marefo amin'ny 'idealy' sy ny fomba fijeriny. Ny olon-tsotra dia tsy manana izany raha tsy hoe angatahan'ny governemanta izany. Ireo matahotra sy miafina mihatsaravelatsihy, ary tsy misy maha-izy azy. Zum kotzen.
19 June 2019 ao amin'ny 18: 15
idd compromise mangina, izay ahazoan'ny andian'omby an-kisoa amin'ny fepetra henjana hihinan-kanina any amin'ny tanimboly amin'ny fotoana voatondro, eo ambany fanaraha-maso mavesa-danja izany. Raha raisina fa ny vola fandoavam-bola amin'ny faran'ny vola dia mihoatra lavitra noho ny teboka miavaka izay ny BS [N] dia mamokatra sy mahasoa. Rehefa mihena ny fandrosoan'ny fotoana sy ny vokatra dia miadana ny BS [N] nefa tsy mahomby ary ny antonony dia mampihena be ny fampiasana ireo fitaovana azo ampiasaina amin'ny mpamily andevo mba tsy handoavana ny tombony. Tonga soa eto Madurodam, izay misy ny lanjany, ny helo ary ny zaridaina dia mihazona hatrany. Amin'ny voalohany dia toa maotina sy malefaka izy io, saingy misy fitaka mamitaka.
19 June 2019 ao amin'ny 18: 44
Ity Ramatoa Schaap ity dia tsy mpampianatra noforonina, fa mpilalao sarimihetsika iray (mety tsara karama).
Amin'ny lafiny iray, tsy te hilaza aho hoe tsy misy ny endrika fonosana tsy misy, mieritreritra fotsiny aho fa mora kokoa ny mahazo mpilalao adala adala ampy hanao zavatra toy izany ho an'ny salan-karama.
Ary somary sarotra tamiko ny sary mihetsik'ity ondry ity.
19 June 2019 ao amin'ny 20: 20
Na dia izany aza dia azo antoka tokoa ny manome endrika vaovao amin'ny mpilalao sarimihetsika toy izany (jereo ny minitra farany ao amin'ny NVIDIA video mba hahitana ny fomba tsotra)
19 June 2019 ao amin'ny 23: 03
Soa ihany, ny tafika troll (moderatepr tafika) dia mety hosoloina AI, satria ravan'ny kirihitra izy ireo:
« Raha tanteraka ny faminaniana dia porofon'ny fahamarinanao ve ny finoanao?
Anja Schaap no nahita fatin'ny alemana maty tany an-dranomasina? Azo atao ve izany araka ny lalàn'ny natiora? »
Total visits: 11.521.713
Fampiroboroboana: maimaimpoana amin'ny fialan-tsasatra miaraka amin'i Martin Vrijland
Christian van Offeren op Ny avana dia misolo tena ny fivavahana mpankafy fa ny mpanohana kosa mihevitra fa miady ho an'ny 'fahasamihafana sy fahatsapan-tena' izy ireo.